အော်ပရေတာ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label အော်ပရေတာ. Show all posts
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများ
ပြည်တွင်း မှာတော့ လက်ရှိ Ooredoo, Telenor နဲ့ MPT ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အော်ပရေတာ ၃ ခု အဓိက ရှိပါတယ်။ ဒါက ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ တခု အတွက် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ်မှာတော့ နိုင်ငံ အလိုက် အော်ပရေတာပေါင်း များစွာ ကနေ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တွေ ဖြစ်တဲ့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင် မှုတွေကို ပေးနေတာပါ။ အခု ပြောမှာကတော့ တနှစ်တာ ကာလ အတွင်း ဝင်ငွေ အများဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေ အကြောင်း ပြောပြမှာပါ။
(၁) AT&T Inc. (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၄၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) – အမေရိကန် နိုင်ငံ၊ တက္ကဆက် ပြည်နယ်မှာ ရုံးစိုက်ထား တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တနှစ် အတွင်း ဈေးကွက် အတွက် ရင်းနှီးငွေ ၂၅၈ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ ၁၄၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ရခဲ့တာပါ။ Direc TV ဆိုတဲ့ Broadband TV ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခုနှစ် အတွင်း ကုမဏီကနေ 5G ကွန်ရက် စနစ်ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးဖို့ ရှိနေတယ် လို့ သိရပါတယ်။ Time Warner Inc. လို ရုပ်သံ ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းစုကိုလည်း ဝယ်ယူဖို့ ရှိနေတယ် လို့ သိရပါတယ်။
(၂) Verizon Communications Inc. (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၃၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ) – အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက် အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီပါ။ Broadband နဲ့ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါတယ်။ ဒီကုမဏီက Bell Atlantic Corp. နဲ့ GTE Corp. နှစ်ခု ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ပူးပေါင်းပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ Vodafone နဲ့ Yahoo! Inc. တွေနဲ့လည်း လုပ်ငန်းတူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်း ကုမဏီရဲ့ တန်ဖိုး ၂၁၆ ဘီလီယံ ရှိပြီး ၁၃၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ဝင်ငွေ ရခဲ့တာပါ။
(၃) China Mobile Ltd. (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၇.၈ ဘီလီယံ) – တရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဈေးကွက်မျာ ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ထိအောင် ရရှိထားပါတယ်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ သုံးစွဲသူ ၈၀၇သန်း ရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလမှာ ၈၃၅သန်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တန်ဖိုးအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၂၂၈ ဘီလီယံရှိပြီး တရုတ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်ကာ လိုအပ်တဲ့ လုံခြုံရေး စနစ်တွေ အတွက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းတွေကနေ တာဝန်ယူ တွဲဖက် လုပ်ကိုင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) Nippon Telegraph & Telephone Corp (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၉၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ) – ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမှာ ရုံးစိုက်ထား တဲ့ ဂျပန်ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတခုပါ။ ဂျပန်အစိုးရက လုပ်ငန်းရဲ့ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ၉၄ ဘီလီယံ တန်ဖိုး ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာမှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနဲ့ အကြီးမားဆုံး IPOs လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Deutsche Telekon AG (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၇၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) – ၁၉၉၆ ခုနှစ်က တည်ထောင် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဂျာမနီ အခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီပါ။ ဂျာမနီ အစိုးရက ရှယ်ယာ ၃၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တန်ဖိုး ၈၁ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။ Narrowband သုံးသူ သန်း ၄၀၊ Broadband သုံးသူ ၉ သန်းနဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက် သုံးသူ ၁၄ သန်းကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတာပါ။
(၆) SoftBank Group Corp (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၇၄ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ) – တိုကျိုမှာပဲ ရှိတဲ့ ဂျပန် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ တခုပါ။ အမေရိကန် အခြေစိုက် Sprint Coporation ကနေ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဂျပန်မှာ Yahoo, Alibaba Group နဲ့ Morningstar တွေကို လက်ခွဲ လုပ်ကိုင်နေတာပါ။ တန်ဖိုး ၈၀ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။ Apple နဲ့ နည်းပညာပူးပေါင်းပြီး ၁ ဘီလီယံဖိုး ထပ်မံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ ရှိနေတာလည်း ဖြစပါတယ်။
(၇) Vodafone Group Plc (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၆၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ) – လန်ဒန်မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ အင်္ဂလန် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီပါ။ လုပ်ငန်းရဲ့ သက်တမ်း ၂၆ နှစ် ရှိပါပြီ၊ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၆ နိုင်ငံမှာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပြီး သုံးစွဲသူ သန်း ၄၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသတွေကို ဈေးကွက် နေရာ ရထားတာပါ။ တန်ဖိုး ၆၇ ဘီလီယံရှိပါတယ်။ Verizon Wireless မှာ ရှယ်ယာ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါ သေးတယ်။
(၈) America Movil SAB de CV (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၆ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ) – တန်ဖိုး ဘီလီယံ ၄၀ ရှိတဲ့ လက်တင် အမေရိက ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီပါ။ မက္ကဆီကို အခြေစိုက် ဒီကုမ္ပဏီက ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှာတင် ကြိုးမဲ့ဖုန်း သုံးသူ ၂၈၃ သန်း၊ ကြိုးဖုန်း ၃၃ သန်း၊ Broadband သုံးသူ ၂၆ သန်း၊ PayTV သုံးသူ ၂၂ သန်းကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတာပါ။ မက္ကဆီကိုရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဈေးကွက် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) China Telecom Corporation Limited (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ) – တရုတ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်တွင်း ကြိုးဖုန်းဝန်ဆောင်မှု အပိုင်းမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးဆုံး Wi-Fi Braodband စနစ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ Broadband သုံးသူ ၁၉၇ ဒသမ ၉ သန်း ရှိပါတယ်။ 4G ကွန်ရက်စနစ် လည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပြီး သုံးစွဲသူ ၅၈ ဒသမ ၄၆ သန်း ရှိနေတာပါ။ တန်ဖိုး ၃၇ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။
(၁၀) Telefonica S.A. (ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ) – စပိန် အခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး ဥရောပ၊ အာရှ၊ တောင်၊ မြောက်နဲ့ ဗဟို အမေရိကနယ်တွေမှာ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေပါတယ်။ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၁ နိုင်ငံ ရှိပြီး ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းသုံးစွဲသူ သန်း ၃၀၀ ရှိပါတယ်။ တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၄၉ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။
From : ဒီဗွီဘီ by သက်နိုင်ဦး(UCSL)
တယ်လီနော ကုမ္ပဏီက အနှေးယာဉ် များအား ကူညီ ပြုပြင်ပေး
‘တယ်လီနော ကုမ္မဏီရဲ့ အနှေးယာဉ် များအား ကူညီ ပြုပြင် ပေးခြင်း’ အစီ အစဉ်ကို လှိုင်မြို့နယ်မှာ ပြုလုပ် ပေးခဲ့ ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္မဏီ တခုဖြစ်တဲ့ တယ်လီနော ကုမ္မဏီရဲ့ အနှေးယာဉ် များအား ကူညီ ပြုပြင် ပေးခြင်း အစီ အစဉ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ မနက်က ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ် ရွာမ ကျောင်းလမ်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် စတင် လုပ်ဆောင်ပေး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီ အစဉ်မှာ အနှေးယာဉ် ဆိုက်ကား ၂၅၀ အတွက် ဘီးကာဗာတွေ တပ်ဆင် ပေးတာ၊ ဆိုက်ကားတွေ အတွက် ထီးတွေ တပ်ဆင် ပေးတာ တွေကို လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“လှိုင်မြို့နယ်မှာ ဆိုက်ကားပေါင်း ၁၅၀၀ လောက် ရှိတယ်။ အဲဒီလောက် ရှိတဲ့ အထဲက ရှေ့ပြေး အနေနဲ့ ၂၅၀ လောက်ကို အခု တယ်လီနော Branding တွေ လုပ်ပေး ခဲ့တယ်။
အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်။ ဆိုက်ကားလေး တွေလည်း သေသေ သပ်သပ် ဖြစ်သွားတယ်။ စီးတဲ့ လူတွေ၊ နင်းတဲ့ လူတွေလည်း နေအရိပ် ထဲက အေးအေး သက်သာ စီးရတယ်ပေါ့။
ရန်ကုန်မြို့တော် သာယာလှပရေး အတွက်လည်း တဖက် တလမ်းက အထောက် အကူပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ရည်ရွယ်ချက် တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်
ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ တယ်လီနော မြန်မာမှ Senior Expert, Corporate Communications ကိုအဲလက်စ် ညီညီအောင်က ပြောပါတယ်။
အနှေးယာဉ် လုပ်သားတွေကို ကူညီပြင်ဆင် ပေးတဲ့ အစီအစဉ်မှာ လှိုင်မြို့နယ်ထဲက အနှေးယာဉ် လုပ်သား အားလုံး မပါဝင်ခဲ့ တာကြောင့် အနှေးယာဉ် လုပ်သားတွေ ကြားမှာ ဝေဖန် မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနှေးယာဉ်တွေကို ပြင်ဆင်ပေး တာတွေ၊ အနှေးယာဉ် လုပ်သားတဦးကို ၅၀၀၀ ပေးတဲ့ ပုံစံကိုလည်း အတိအကျ မသိရဘူးလို့ အနှေးယာဉ် လုပ်သားတဦးက ဆိုပါတယ်။
“ဒီအတိုင်းပဲ ကပ်ပေးမယ်၊ စာရင်းပေး ဆိုပြီး စာရင်းပေး တဲ့သူ ကပ်ပေး သွားပြီးတော့ ပိုက်ဆံ ၅၀၀၀ ပေးသွားတယ်။ ကျနော်တို့ သိတာ ကတော့ ကြော်ငြာတဲ့ အနေနဲ့ပေါ့။ အဲဒီလောက်ပဲ သိတယ်။
အခု ၅၀၀၀ ပေးတယ်လို့ပြောတာ ၁ လကို ၅၀၀၀ ပေးတာလား။ အခုအစီးရေ ၂၅၀ ထဲမှာ လာတဲ့အစီးတွေပဲ ရပြီးတော့ စာရင်းထဲကျန်တာတွေက ဘယ်နေ့ကို ချိန်းမှာလဲ။ နောက်လကျမှပေါင်းပြီးတော့ ၁ သောင်း ပေးမှာလား။ အဲဒါကို ကျနော်တို့က သိချင်တာ” လို့ အနှေးယာဉ်လုပ်သား ဦးညွန့်ဟန်က ပြောပါတယ်။
အခုပြုလုပ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ကို ၁ နှစ်တာကာလအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အနှေးယာဉ် လုပ်သားတွေရဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အပေါ် မူတည်ပြီး နောက်ထပ် အစီအစဉ်တွေ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
From : ဒီဗွီဘီ by ဟိန်းကို
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/187334
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, February 03, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ပြည်တွင်းသတင်း, အော်ပရေတာ
မှတ်ပုံတင်ပြီး အမ်ပီတီ ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များ ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ရန် မလို
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး အမ်ပီတီ ဖုန်းတွေကို မှတ်ပုံ တင်ဖို့ လိုအပ်နေ တယ်လို့ ဖုန်းထဲကို စာတိုတွေ ပေးပို့နေ ပမယ့် မှတ်ပုံ တင်ပြီးသား ဆိုရင် မလိုအပ် ဘူးလို့ အမ်ပီတီရဲ့ ဒုတိယ စီးပွားရေး အရာချုပ် ဦးသိန်းဟုတ်က ပြောပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ အမ်ပီတီဆင်းမ်ကတ်တွေ သွားရောက်မှတ်ပုံတင်နေကြတဲ့ ကြားထဲက မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ စာတိုတွေ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးသူတွေထံ ထပ်မံဝင်ရောက်နေတာပါ။
“အခု မက်ဆေ့ဂ်ျကို စာပြင်ခိုင်းထားပါပြီ။ မှတ်ပုံမတင်ရသေးရင် ဆိုပြီး ထပ်ထည့်ခိုင်းထားပါတယ်” လို့ ဦးသိန်းဟုတ်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်တွေကို မှတ်ပုံတင်မထားဘူးဆိုရင် ၂၀၁၇ မတ်လကုန်မှာ ယာယီဖြတ်တောက်သွားမယ်လို့ အစိုးရက ကြေညာထားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ အမ်ပီတီ သုံးစွဲသူပေါင်း ၂၁ သန်းလောက်ရှိတဲ့အထဲ ၁၃ သန်းဝန်းကျင် မှတ်ပုံတင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးသား ဆင်းမ်ကတ်တွေ၊ အမည်ပေါက်စာချုပ်နဲ့ ဝယ်ယူထားပြီး ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကတော့ ထပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲ သုံးစွဲသူ ပြောင်းနေရင်တော့ မှတ်ပုံပြန်တင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် မှတ်ပုံတင် ဒါမှမဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းသားကတ် တခုခုလိုမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ ပတ်စ်ပို့ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရက ထုတ်ပေးထားတဲ့ သက်သေခံကတ်ပြားတခုခု လိုအပ်ပါတယ်။
အမ်ပီတီဖုန်းတွေအနေနဲ့ မှတ်ပုံမတင်ရသေးဘူးဆိုရင် အမ်ပီတီအိတ်ချိန်းတွေ၊ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ စီဘီဘဏ်၊ ကေဘီဇက်ဘဏ်တွေမှာ မှတ်ပုံတင်လို့ရမှာပါ။
အမ်ပီတီ ဝက်ဘ်ဆိုက် https://care.mpt.com.mm/၊
တယ်လီနောဝက်ဘ်ဆိုက် http://ecaf.telenor.com.mm နဲ့
အမ်အီးစီဖုန်းတွေကတော့ www.mectel.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက် ကနေပြီး ကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်လို့ ရပါတယ်။
အူရီဒူးဆိုရင် *666# ကိုနှိပ်ပြီးလည်း စစ်ဆေးနိုင် သလို မှတ်ပုံ မတင်ရသေး ရင်တော့ အွန်လိုင်းက မှတ်ပုံတင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို တပါတည်း ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
From : ဒီဗွီဘီ ဒီဗွီဘီ by ပိုင်စိုး
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/180611
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, December 21, 2016 No comments:
အော်ရီဒူးမြန်မာရဲ့ ခုဖြေခုထော အစီအစဉ် ယာယီ ရပ်ဆိုင်း ခံရ
တယ်လီဖုန်း သုံးစွဲ သူတွေကြား ဝေဖန် မှုတွေ ရှိနေတဲ့ အော်ရီဒူး မြန်မာရဲ့ "ခုဖြေခုထော" အစီအစဉ်ကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းဖို့ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာနက မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ် ပြုလုပ်မယ် ဆိုတာကို ကြိုတင် အကြောင်းကြား ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ သလို ပြည်သူတွေ အကြား တုန့်ပြန်မှု မကောင်းတဲ့ အတွက် ယာယီ ရပ်ဆိုင်းဖို့ စာထုတ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးမျိုးဆွေ က ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိ / မရှိအပြင် တခြား ဥပဒေတွေနဲ့ ညီညွတ်မှုရှိ / မရှိ ကို စစ်ဆေး သွားမှာ ဖြစ်တယ် လို့လည်း ဦးမျိုးဆွေ က ပြောပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, July 25, 2016 No comments:
တစ်မိနစ် တစ်ကျပ်နှုန်း ပရိုမိုးရှင်း Telenor စတင်
တယ်လီနော မြန်မာမှ ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၇ နာရီ အတွင်း အသုံးပြုသူများ အတွက် တမိနစ်လျှင် တကျပ်နှုန်းဖြင့် `စူပါဇီးကွက်`ပရိုမိုးရှင်းကို စတင် လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ဒေတာ အသုံးပြုမှုအတွက် တမိနစ် (သို့) 1 MB လျှင် တကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စူပါဇီးကွက် ပရိုမိုးရှင်းကို ရယူနိုင်ရန်အတွက် 500 သို့ T2500 ဟု ပေးပို့လျှင် ရက် ၃၀ စာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ 500 သို့ T800 ဟု စာတိုပေးပို့ ခြင်းဖြင့် တပတ်စာအဖြစ်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် *802# (သို့) *803# ဖြင့်လည်း စူပါဇီးကွက် ပရိုမိုးရှင်းကို ရယူနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
စူပါဇီးကွက် ပရိုမိုးရှင်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။၏
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, December 19, 2015 No comments:
ကျပ်သိန်းချီ တန်ကြေးရှိ ဖုန်းနံပါတ်အလှ ၁၂၀ ကျော် MPT လေလံတင်မည်
ပြည်တွင်းရှိ လျှပ်စစ်မီး မရရှိ သေးသော ဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေး ကျောင်းများတွင် မီးအိမ်များ လှူဒါန်းရန် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းက နံပါတ် တစ်ခုလျှင် ကျပ် ၁၅ သိန်းခန့် ကြမ်းခင်းဈေးရှိ နံပါတ် ခုနစ်ခု အပါအဝင် ဖုန်းနံပါတ် အလှ ၁၂၀ ကျော်ကို လေလံတင် ရောင်းချမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း (MPT) ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ လေလံတင် ရောင်းချပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ပြီး လေလံတင် ရောင်းချခြင်းမှ ရရှိသော ငွေအားလုံးကို မန္တလေး အခြေစိုက် ဖောင်တော်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ တစ်ဆင့် လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ကြောင်း MPT က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
"မှန်းထားတာ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်ကျော် လောက်ရနိုင်မယ် ထင်တယ်"ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ Deputy Chief Commercial Officer ဦးသိန်းဟုတ်က ပြောဆိုသည်။
လေလံတင် ရောင်းချမည့် ဖုန်းနံပါတ် အလှများတွင် ဆင်တူနံပါတ် ခုနစ်လုံး ပါမည့် နံပါတ် ခုနစ်ခု၊ ဆင်တူ နံပတ် ခြောက်လုံးပါ ဖုန်းနံပါတ် ၄၉ ခုခန့် နှင့် ဆင်တူ နံပတ်ငါးလုံးပါ ဖုန်းနံပါတ် ၇၀ ခန့် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး လေလံ ဆွဲလိုပါက vanitynumbers@myanmaremc.com၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၅၆၃၁၃၀ များသို့ဆက်သွယ်၍ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ အလုပ် အကိုင်နှင့် ဘဏ်ငွေ စာရင်းနံပါတ်များ ကိုပါ တင်ပြ၍ ပွဲတက်ရန် လျှောက်ထား ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
Original link - https://www.facebook.com/thevoiceweekly
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, December 08, 2015 No comments:
Shop.com.mm ၏ အွန်လိုင်းဈေးရောင်း ပွဲတော်နေ့တွင် အူရီဒူးက တစ်နေကုန် အင်တာနက် အခမဲ့ သုံးခွင့်ပေးမည်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ။။
နိုဝင်ဘာ ၂၇ရက်တွင် ကျင်းပမည့် Shop.com.mm၏ အွန်လိုင်း ဈေးရောင်း ပွဲတော်ဖြစ်သည့် Black Friday ပွဲတော်တွင် သတ်မှတ် ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ၇၀% ထိ လျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းချ သွားမည်ဟု Shop.com.mm၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ Ms.Elin TORSTENSSON က နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက်က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ Sule Shangri-La Hotel ရှိ ပင်းယခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲနေ့တွင် လူသုံးကုန် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ နှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများကို ၇၀ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ Black Friday တွင် Ooredoo Myanmar ၊ Maybelline NewYork နှင့် Phillips တို့ကလည်း ပါတနာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ထားသည်။
Ooredoo Myanmar၏ လူမှုဆက်ဆံရေးဌာန အကြီးတန်းမန်နေဂျာနှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါ်သီရိကြာညို က " ပြည်သူအားလုံး ဒီBlack Friday ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲနိုင်အောင် အဲ့နေ့မှာ Shop.com.mm ကို Ooredoo sim card ရဲ့အင်တာနက်နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်နေကုန် ဘယ်လောက်သုံးသုံး ဖုန်းဘေလ်မဖြတ်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင်ပြောသည်။
နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလတိုင်း၏ နောက်ဆုံးအပတ် သောကြာနေ့တွင် ကျင်းပလေ့ရှိသော Black Fridayပွဲတော်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်း နှင့် အင်တာနက် သုံးစွဲမှု မြင့်မားလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် မှာယူကာ အိမ်တိုင်ရာရောက်စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူရသည်ကို နှစ်ခြိုက်မှုများလာ၍ Black Friday ကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်ဟု Ms. Elinက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ Shop.com.mm ကိုစီမံခန့်ခွဲနေသည့် Daraz Group၏ CEO ဖြစ်သူ Dr.Jonathan DOERRက ဤBlack Friday ပွဲတော်ကို ကျင်းပရန် လေးလခန့် အချိန်ယူခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
အာရှနိုင်ငံများတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည့် Black Friday သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အောင်မြင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
Original link - http://mizzimaburmese.com/article/7807
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, November 24, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ စီးပွာရေးသတင်း, ဆက်သွယ်ရေး, ပြည်တွင်းသတင်း, အော်ပရေတာ
လွိုင်ကော်မြို့က တယ်လီနော ဖုန်းတိုင် ကန့်ကွက်ခံရ
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့ နောင်းယား (က) ရပ်ကွက် ဘုရင့်နောင်လမ်း အိမ်အမှတ် (န/၃၂၄) နေအိမ် ခြံဝင်း အတွင်း တယ်လီနော ဖုန်းတိုင် စိုက်ထူ ခဲ့ရာမှာ ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်တွေကို အသိ မပေး ခဲ့တာကြောင့် ရပ်ကွက် အတွင်း နေထိုင် သူတွေက ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဆီကို လက်မှတ်ထိုး ကန့်ကွက်စာ တင်ခဲ့ ပါတယ်။
တယ်လီနော ဖုန်းတိုင်ကြောင့် စက်သံ ဆူညံတာ အပါအ၀င် နေအိမ် အချို့မှာ မွေးမြူ ထားတဲ့ ဝက်တွေ သေဆုံးတာနဲ့ ဇီးတင်ရာမှာ မအောင်မြင် တာဟာ ဖုန်းတိုင်ကြောင့်လို့ ဒေသခံ aတွက ယူဆ တာကြောင့် ကန့်ကွက် ခဲ့ကြတာပါ။
နောင်ယား (က) ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ ဆရာမ နော်အားစေးက “သိတဲ့အတိုင်း ဒို့လူတွေက ဆင်းရဲတယ်။ အရက်ချက်၊ ၀က်မွေးပေါ့။ အဲဒီဟာနဲ့ သူတို့လုပ်ကိုင် စားသောက်လာတဲ့ အခါကျတော့ ၀က်တွေက အစု အပြုံလိုက် သေနေတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီနား တ၀ိုက်ပဲ သေတာ။ သေတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့က လာပြောတဲ့ အခါကျတော့ ဒါမလုပ်လို့ မဖြစ်တော့ဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီတိုင်က ကလေးတွေရဲ့ သားသမီး မြေး၊ မြစ်တွေနရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကြည့်ပြီးတော့မှ ဖြုတ်သင့်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီတိုင်ကို ဖြုတ်ဖို့ လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလိုကန့်ကွက်မှုရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေး ဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်း နဲ့ တယ်လီနော တာဝန်ခံ တွေက နောင်ယား (က) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ ဒီနေ့မနက် ၉ နာရီအချိန်မှာ တွေ့ဆုံဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
တယ်လီနော တာဝန်ခံ ကိုပိုင်သူစိုးက “မှန်ပါတယ်။ မီးစက်က အသံမထွက်ဘူး မဟုတ်ဘူး။ ထွက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒီမှာ မီးက မရရှိသေးသရွေ့ မီးစက် run ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် တာဝါကုမ္ပဏီကိုလည်း အမြန်းဆုံး ပါဝါမီတာနဲ့ run ပေးဖို့ ကျနော်တို့ မေတ္တာရပ် ခံထား ပါတယ်။
သူတို့လည်း လုပ်ပေးနေပါတယ်။ အဲတော့ဒီကြားထဲမှာ မီးစက်ဒဏ်မခံနိုင် ဘူးဆိုလုိ့ ကျနော်တို့ စက်ကိုတော့ ရပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပါဝါမီတာနဲ့ run တဲ့အခါကျရင်တော့ အဆင်ပြေမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက်က ဒီဆက်သွယ်ရေးက မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေ တာပဲ။ အဲတော့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေမရှိပါနဲ့။ တကယ်လည်း ကျန်းမာ ရေးအရ မထိခိုက်ပါဘူး။ အားလုံး စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်း လျော့စေချင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
လွိုင်ကော်မြို့မှာ တယ်လီဖုန်းတာ ၀ါတိုင်တွေ တော်တော် များများး ဆောက်လုပ်ပြီး စီးသွားပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အကြမ်းဖြင့် တိုင် ၃၀ တော့ စတင်လည်ပတ်နေပြီလို့ ကိုပိုင်သူစိုးက ပြောပါ တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်တွေတုန်းက လည်း လွိုင်ကော်မြို့နယ် ချိကယ်ကျေးရွာ အုပ်စု ထေးတမကျေး ရွာက အော်ရီဒူး ဖုန်းတိုင် ဆူညံလို့ဆိုပြီး ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ – ခွန်းတူးတူးလေး
Original link - http://burmese.dvb.no/archives/122560
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, November 15, 2015 No comments:
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးတယ်လီသွန် အစီအစဉ် MPT Partner အဖြစ်ပါဝင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ဖြစ်တဲ့ MPT က အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး တယ်လီသွန် အစီအစဉ် အတွက် Official partner အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ်။
တယ်လီသွန်ဟာ ဒေသခံ အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ရေဘေးသင့် ဒေသများ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း တွေအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေတဲ့ သီတင်းကျွတ် Coca cola ဂီတဖျော်ဖြေပွဲရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ MPT က ဂီတပွဲတော်နဲ့ တယ်လီသွန်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ၂ ခုစလုံးအတွက် Official partner အဖြစ် ကူညီဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ နေတိုး၊ ပြေတီဦး၊ ဝတ်မှုံရွှေရည်၊ နန်းစုရတီစိုးတို့ကလည်း တယ်လီသွန် ပြုလုပ်ရာ ယာယီအဆောက်အဦးမှာ လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုဖို့ ရှိနေခဲ့သလို၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေဆိုခြင်း၊ လှူဒါန်းမှု ကတိကဝတ်များလက်ခံခြင်းတို့အတွက် အလှမယ်များဖြစ်ကြတဲ့ ထက်ထက်ထွန်း၊ မေဘရဏီသော်၊ ဟန်လေးနဲ့ ချိုချိုထွန်းတို့ကဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးတယ်လီသွန်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲက နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ ရေဘေးသင့်ဒေသတွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို ပြုလုပ်နေတဲ့ MPT ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေထဲက တခုဖြစ်ပါတယ်၊ ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲ မှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာအချိန်အခါတွေ ဖန်တီးပေးမှာပါ။ မိသားစုတွေ အများကြီးတစုတဝေးတည်း ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်၊ မတူညီတဲ့ ဂီတမျိုးဆက်တွေနဲ့ ဂီတအမျိုးအစား အကုန်လုံးကိုလည်း တပေါင်းတစည်းတည်း ခံစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒီလိုပွဲကြီးမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် MPT က အရမ်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်” လို့ MPT-KSGM Joint Operationsရဲ့ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က ပြောခဲ့ပါတယ်။
လှူဒါန်းမှု တခုပြုလုပ်ရန် ပြောကြားပြီးပါက ငွေသားများကို Rebuild Myanmar Fund သို့ အဆင်ပြေ နှစ်သက်ရာ ရိုးမဘဏ် ဘဏ်ခွဲတွေကနေ လွှဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတယ်လီသွန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမှာ မှတ်ယူထားမယ့် အချက်အလက်တွေမှာတော့ ခေါ်ဆိုသူအမည်၊ လှူဒါန်းမယ့် ပမာဏ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ နေထိုင်တဲ့ မြို့နယ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်တို့ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Original link - http://blog.irrawaddy.org/2015/11/mpt-partner.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, November 10, 2015 No comments:
တယ်လီနောမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလင်းအိမ် စင်တာများ ဖွင့်လှစ်
ကွန်ပျူတာ သင်တန်းတွင် အခြေခံ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနည်း၊ Microsoft Word, Excel နှင့် Powerpoint အသုံးပြု နည်းများကို သင်ကြားပေး တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တယ်လီနောဟာ Myanmar ICT for Development Organization (MIDO) နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလင်းအိမ် စင်တာများကို တည်ထောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ၂၀၁၈ အကုန်တွင် အလင်းအိမ် စင်တာ အရေ အတွက် ၂၀၀ အထိ တည်ထောင်သွားဖို့ ရည်မှန်း ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Original link - http://blog.irrawaddy.org/2015/11/blog-post_54.html
ကဏ္ဍ ပညာရေးသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း, အော်ပရေတာ
သီတင်းကျွတ် ကာလ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် MPT သုံးစွဲ သူများသည် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ တစ်ရက်လုံး စာတိုပေးပို့မှု များကို အခမဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် MPT ၏ GSM/WCDMA နှင့် CDMA သုံးစွဲသူ အားလုံး အတွက်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် ည ၁၂း၀၀ နာရီကျော် သည့် အချိန်မှ စတင်၍ အောက်တိုဘာလ ည ၁၂း၀၀ နာရီ တိတိ အချိန် (၂၄ နာရီ) အတွင်း MPT နံပါတ် အချင်းချင်း ပေးပို့သည့် SMS စာတိုအားလုံး အခမဲ့ ပေးပို့ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တာအတွက် မိုဘိုင်းဖုန်း နံပါတ် တစ်ခုလျှင် အများဆုံး SMS စောင်ရေ ၂၈ စောင် ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်၇ှိအချိန်အထိ MPT သည် Mobile ဖုန်းအသုံးပြုသူစုစုပေါင်း ၁၆ သန်း ရှိပြီး ဆွေသဟာအသုံးပြုသူ ၁၀ သန်းကျော်၊ ပုံမှန်အသုံးပြုသူ ၆ သန်းကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားသော အော်ပရေတာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Original link - http://www.internetjournal.media/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, October 27, 2015 No comments: